Health Archives - kokochitchit.xyz
မန္တလေးမြို့ရဲ့ နာမည်ကြီးအစားအစာဖစ်တဲ့ မြင့်မြင့်ခင် ထိုးမုန့် လမုန့် မိသားစုများမှလည်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် သိန်း ၅၀၀ လှူဒါန်း.. ကာလဒါန ကုသိုလ်ယူကြတဲ့ မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ စုပေါင်းဒါန အလှူ မြင့်မြင့်ခင် ထိုးမုန့်၊ လမုန့် လုပ်ငန်းမိသားစုများမှ လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်… လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းများနဲ့ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြသောစားသုံးသူ မိဘပြည်သူများရဲ့ စုပေါင်း ကာလဒါနအလှူတော်အဖြစ်အုတ်တစ်ချပ်ပဲနိုင်နိုင်၊ သဲတစ်ပွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် […]
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်က ငွေကျပ်သန်း ၃၀၀၀( ငွေကျပ် ၃ ဘီလီယံ) လှူဒါန်း
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ကမ္ဘောဇဘဏ်က ငွေကျပ်သန်း ၃၀၀၀( ငွေကျပ် ၃ ဘီလီယံ) လှူဒါန်း ကမ္ဘောဇဘဏ်က COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရရှိရေး ရန်ပုံငွေ (COVID-19 Vaccination Fund) သို့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရန်အတွက် ငွေကျပ် သန်း ၃၀၀၀ ( […]
နိုင်ငံသားတိုင်း ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရေးအတွက် ဒေါ်လာတစ်သန်း ( မြန်မာငွေ သိန်းတစ်သောင်းသုံးထောင်ကျော်) လှူလိုက်တဲ့ အလှူရှင်ကြီး ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး နိုင်ငံသားတိုင်း ထိုးပေးရေးအတွက် ဒေါ်လာတစ်သန်း အလှူရှင်တစ်ဦး ပေါ်လာပြန်ပြီ …. ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် နိုင်ငံတော်သို့ မန္တလေးမြို့ ဒေါ်စန်းကြူ (ဒုံးပျံဂျုံစက် ) Capital Diamond Star […]
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဦးဇော်ဇော်က ကျပ် ၂ ဘီလီယံ လှူဒါန်း
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရန် ဦးဇော်ဇော်က ကျပ် ၂ ဘီလီယံ လှူဒါန်း Covid-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ဝယ်ယူရန်အတွက် နိုင်ငံတော်သို့ ငွေကျပ် (၂)ဘီလီယံ လှူဒါန်းလိုက်တယ်လို့ ဧရာဝတီဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးဇော်ဇော်က ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်က “ Covid-19 ကပ်ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက် ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး Covid-19 ကာကွယ်၊ […]
January 7, 2021 ko ko 0
သူဌေးကြီး ဦးချစ်ခိုင်က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့ သိန်းနှစ်သောင်း လှူဒါန်းလိုက်ပြီ.. မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးချစ်ခိုင်က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် သူ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သန်းခွဲ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းမယ်လို့ သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှာ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ (၅-၁-၂၀၂၁) မှာ ဦးချစ်ခိုင်က သူ့ရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ သန်း လှူဒါန်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ […]
January 5, 2021 ko ko 0
လှိုင်Fever Clinic တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီး Covid-19 ကြောင့်ကွယ်လွန် လှိုင်မြို့နယ်၊ ဖျားနာလူနာများ(အခမဲ့)ကုသမှုဆေးခန်းက တာဝန်ခံဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီသျှင်ဟာ ဇန်နဝါရီ(၃)ရက်မှာပဲ Covid-19 ရောဂါကူးစက်ခံရ ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ လှိုင်မြို့နယ်အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်က တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်းကပြောပါ တယ်။ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဟာ အသက်(၇၀)ဝန်းကျင်ရှိပြီး လှိုင်မြို့နယ် Fever Clinic စတင်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ကတည်းက တာဝန်ယူကုသပေးနေတဲ့ […]
ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေကို လုံးဝ အခမဲ့ မီးဖွားပေးနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံ
January 3, 2021 ko ko 0
ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်တွေကို လုံးဝ အခမဲ့ မီးဖွားပေးနေတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံ ကျနော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ပရိသတ်ကြီးတို့သိကြမှာပါ… ခုချိန်မှာတော့ ဒေါ်ခင်ကြည်တစ်ယောက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဆေးရုံတို့ ဖွင့်လှစ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. တကယ်လို့သာ ပရိသတ်ကြီးတို့ […]
January 2, 2021 ko ko 0
တိုက်ပွဲမှာ နောက်မဆုတ်တမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှူး သားဖွားဆရာမကြီး ကျဆုံးခဲ့ရပြီ စွန့်လွှတ်စွန့်စားသူရဲကောင်းသားဖွားဆရာမကြီး ဒေါ်တင်ထွေး(လှိုင်သာယာမြို့နယ်)COVID -19ရောဂါဖြင့်ဆုံးသွားပါပြီ။ ဒီဇင်ဘာ၂၂ ရက်နေ့ကမှအသင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားမြှင့်အားပေးကူညီငွေကိုမြို့နယ်သူနာပြုကြီးဒေါ်ဖြူဖြူနွဲ့ဆီကတစ်ဆင့်ပေးပို့အားပေးခဲ့တာပါ။ ကျနောတို့ရဲ့ရှေ့ တန်းတိုက်စစ်မှူးဘက်စုံသားဖွားဆရာမများ၊အမျိုးသ မီးကျန်းမာရေးဆရာမများ၊သူနာပြုများ COVID-19Positiveဖြစ်ကြတာအသင်းကသတင်းရတဲ့ ၉၉၈ယောက်ထဲက ဒါပထမဆုံးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မိသားစုအတွက်လည်းကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီ ဖြစ်သလိုဌာနအတွက်လည်း စွန့်လွှတ်စွန့်စားတိုက်ပွဲဝင် နေတဲ့သူရဲကောင်းဘက်စုံသားဖွားဆရာမကြီးတစ်‌ယောက်ကျဆုံးခြင်းပါပဲ။ အသင်းအနေနဲ့ကတော့အားကိုးအားထားပြုရတဲ့မိသာ စုဝင်တစ်ဦးဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းပါပဲ။မိသားစုနဲ့ထပ်တူထ ပ်မျှကိုယ်ချင်းစာနာစွာဝမ်းနည်းကြေကွဲစွခံစားပြီးနှမျေ ာတသဖြစ်ရပါတယ်။ ဆရာမကြီးဒေါ်တင်ထွေးရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုကဆရာ […]